Inona ny fiantraikan’ ny filazantsara aminao? - Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy
Inona ny fiantraikan’ ny filazantsara aminao?
Fa natolotro anareo ho isan’ ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana tamin’ ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina;” 1 Korintiana 15:3-4
Ny filazantsara dia ho an’ny olona mpanota, mpandainga, mpihatsaravelatsihy, mpampirafy, mpamono vady, mpanao kolikoly, mpialona, mpangalatra, mpitsiriritra, kamo, tia tena, tezi-dava, mpiavonavona, mpanambany ny hafa, mpivazavaza, mpifoka sigara, mpisotro toaka, mpiloka, mpanatsara tena, mpifosa, jejojejo, ….. sy ny mpanota amin’ ny endriny maro hafa isan-karazany, any anatintsika miafina any, etsy an-daniny anefa miditra am-piangonana ihany ny alahady sady manao ny adidy sy ny asa soa handaminana ny saina sy ny eritreritra. Mety koa aza manana andraikitra eo anivon’ny fiangonana, mila miseho ho tsara sy matotra amin’ny manodidina.
Mihevitra ve ianao fa ao anatin’io lisitra? Aza matahotra fa natao ho anao ny filazantsara!
Io lisitra io dia hanairana anao fa isika rehetra dia mila mpamonjy avokoa, satria tsy misy na dia iray akory ary marina, mila fantatsika fa tsy ny fandovantsika ny maha-kristiana avy amin’ny ray aman-dreny, na ny fiheverantsika fa tsy maninona raha mba manotanota kely ohatran’ny olon-drehetra ihany, na ny fianarantsika tsianjery ny vavaka alohan’ny hisakafo, alohan’ny hatory, na ny fanomboana amin’ny fotoam-pivavahana ny asa na ny fety na zavatra hafa, no hidirantsika any an-danitra, ka hoe ampy izay. Tena diso hevitra tanteraka isika fa tsy izany ny fahamarinana, ary mitondra antsika any amin’ny faheverezana mandrakizay izany raha hianona amin’izany fotsiny isika. Tsy misy miditra any an-danitra raha tsy efa vita fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy dia ny filazantsara velona, tsy misy miditra any an-danitra raha tsy efa nateraka indray amin’ny alalan’ny Fanahy Masina sy ny tenin’Andriamanitra, izay ihany no lalana, aoka izay ny famazivaziana ny aina, aoka izay ny fiheveran-diso fa tsy hamonjy antsika izany.
Meteza hahitsy androany fa mbola fotoanany izao, sokafy ny fo hisokatra ny amin’ny fahamarinana fa hanafaka antsika izany. Fantatr’Andriamanitra ny faharatsian’ny olombelona, tsy mahay ary tsy misaina afa-tsy ny ratsy, tsy tiany isika ho tafasaraka Aminy mandrakizay dia nataony ny famonjena antsika teo amin’ny Hazo Fijaliana, “ Fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka.”hebreo 9:22
Andriamanitra no nanapa-kevitra, Izy no nanantona antsika olombelona, satria fantany fa tsy haintsika izany ; Fahamarinana lehibe tokony handresy lahatra antsika : tsy ezaka na ny asa avy amintsika no hanamarinana antsika fa Andriamanitra no tonga nofo teto an-tany , ary Izy no nanao ny fanavotana, noho ny fitiavany, sy ny fahasoavany ary ny famindrampony, araka ny voasoratra hoe : “ Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha.” 1 Jaona 4:19
“Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra; tsy avy amin’ ny asa, fandrao hisy hirehareha. “Efesiana 2:8-9
Mila midaraboka ny avonavona miafina am-po izay heverantsika fa mba misy ihany avy amintsika antony namonjena antsika, diso izany ary ny fiekentsika an’izany no hanafahan’Andriamanitra antsika. Omeo Azy ny haja, sy ny voninahitra ary ny fisaorana mandrakizay fa raha tsy Izy no nanao ny famonjena dia very isika.
Ary mitondra antsika amin’ny dingana voalohany izany dia ny fibebahana avy amin’ny fo, tsy sarintsariny fa tena izy. Hevero raha tena nandalo an’izany isika, tena nanenina, ary tsy te-hiverina hanota intsony, miaiky fa tena mpanota ary nandova ny fahotana tamin’i Adama sy Eva, miaiky fa ratsy ary tsy afaka hanamarin-tena irery fa mila mpamonjy dia i Jesosy Kristy. Tsy teny averina fotsiny io anefa fa tena fandresen-dahatra lalina avy anatin’ny fo ka taomin’ny Fanahy Masina hibebaka ary mitondra vokatra eo amin’ny fiainana izany dia ny vokatry ny fibebahana, miova tanteraka ny fomba fanao ; Raha nasaina mpanompon’Andriamanitra ianao indray andro hitsangana raha resy lahatra tamin’ny fahotana dia nitsangana fotsiny satria ohatran’ny nentin’ny ambiansa, na fahatsapana teo fotsiny, na koa niaraka taman’olona dia mba nitsangana fa mahasosotra, kanefa aty aoriana tsy hitanao akory izay tena antony, sy izay tena fiovana teo amin’ny fiainanao dia satria tsy mbola nandalo fibebahana marina ianao, mbola mihevitra ianao fa mbola azo iafian’Andriamanitra ny toetranao, tsy dia maninona loatra, mbola takona ny masonao ny amin’ny maha-masina an’Andriamanitra izay tsy mankasitraka fahotana, tsy hitanao ny hasarobidin’ny ran’i Jesosy latsaka teo amin’ny Hazo Fijaliana ho anao, izay manafaka anao, izay nividy anao, mbola tsy rikoriko ianao ny aminao iray manontolo ary tsy mbola niaiky tanteraka fa araka ny voasoratra hoe: “Tsy misy marina na dia iray akory aza; Tsy misy izay mahafantatra, Tsy misy izay mitady an’ Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, Samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra; Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza.” Romana 3:10-12
Miantefa amintsika io teny io, ary tafiditra ao daholo izay olombelona rehetra! tsy ankanavaka, mila mandalo fibebahana, fieken-keloka tena izy isika raha te-hiaina ny fianam-pandresena izay ao amin’i Jesosy Kristy Ilay naharesy ny fahafatesana. Raha misy tsy mandeha tsara ao amin’ny fianana maha-kristiana dia diniho tsara aloha mialoha ny zavatra hafa rehetra hoe tena efa nibebaka ve. Ny Fanahy Masina no mitarika antsika amin’izany ary fanomezana avy amin’Andriamanitra izany. Sokafy ny fo, velaro eo anatrehan’Andriamanitra izay rehetra sakana tsy hahafahana mibebaka marina eo anatrehany, fa afaka ny hibebaka isika, nomeny antsika izany fahafahana izany, ary matoa Izy tonga teto an-tany hitondra famonjena dia satria tiany hovonjena isika ary tiany ho tanterahana hatramin’ny farany izany famonjena izany, aza manamafy ny fonao fa ny fandavanao izany no hitondra anao any amin’ny fahaverezana mandrakizay. Mibebaha, aza misy hamaivanina ny fahotana, aza hamelana raha tsy voaborakao, aza misy fihinina fa tsory eo anatrehan’i Jesosy izay efa miandry fotsiny am-pitiavana ny hamelana antsika satria “raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ ny tsi-fahamarinana rehetra.” 1 Jaona 1:9
Izay no atao hoe fahasambaran’ny zanak’Andriamanitra dia ny voavela heloka. “Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’ i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny “Salamo 32:1-2
Ny fahamarinana dia izao : voavela ny fahotantsika raha nibebaka marina isika satria efa nentin’i Jesosy teo amin’ny Hazo Fijaliana, efa maty sy nalevina izy, izany ny filazantsara, olon’afaka isika, tsy natao ho andevon’ny ota intsony ka mbola hilaza hoe, tsy mety raha tsy mba manotanota kely ihany, tsy fomba fitenitsika na fianantsika intsony izany “ary novonoiny ny soratànan’ ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ ny hazo fijaliana,,” Kolosiana 2:14
Izay ny dingana voalohany, ary manaraka an’izay dia ny fanekenao an’i Jesosy ho tompon’ny fiainanao, tsy ianao intsony no velona fa Izy no velona ao anatinao, izay tiany no ataonao fa tsy izay tianao intsony. “Voahombo miaraka amin’ i Kristy amin’ ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ ny nofo dia ivelomako amin’ ny finoana ny Zanak’ Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. “Galatiana 2:20. Izany ny filazantsara, maty sy nalevina Jesosy ary tsy Izy irery fa isika koa miaraka aminy “fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nohomboana taminy hanimbana ny tenan’ny ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin’ny ota.” Romana 6:6
Mandeha amin’ny finoana ny tenin’Andriamanitra isika fa efa voavela heloka ary efa nataony ho olom-baovao, rehefa vaovao dia tsy tonta intsony. Tsy misy hifandraisana amin’ny taloha intsony, fa nomeny fanahy vaovao, izany ny filazantsara. Efa napetrany ao antintsika ny fanahiny hahaizantsika mihaino sy mankato Azy amin’ny alalan’ilay fanahy vaovao namboariny ho antsika araka ny voasoratra hoe : “Koa raha misy olona ao amin’ i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo.” 2 Korintiana 5:17
Ary rehefa maty Jesosy dia nitsangana, tsy izy irery fa isika miaraka aminy koa, izany ny filazantsara, koa izao ary “Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin’ ny ota hianareo ka efa tonga mpanompon’ Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay.” Romana 6:22
Mety efa mahazatra antsika ny mihaino sy mamaky an’ireo tenin’Andriamanitra ireo fa androany kosa dia hiainana amin’izay fa tsy ataontsika fahalalana be mijanona ao amin’ny saina fotsiny atao tsianjery fa ampidino ao am-po dia hiainana isan’andro fa izany no andrasan’Andriamanitra amintsika, ny hamaky sy hihaino ary hiaina ny teniny. Tsy voatokana ho an’ny “mpanompon’Andriamanitra “, pastera na evanjelista na mpiandry na izay mbola “titre” hafa ihany koa , ny hisehoan’Andriamanitra fa “Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. ” Jaona 14:21, hoa ahy sy ho anao koa izany androany, ny tenin’Andriamanitra no ametrahantsika ny finoana fa tsy teny hafa, izay lazainy dia hainy atao koa. Ka raha hiseho amintsika Izy araka ny teniny, manao ahoana re ny vokatr’izany eo amin’ny fianantsika e! Hijoro vavolombelona amin’izay isika ny amin’ny fiovan-toetra, ny amin’ny fahatsaran’Andriamanitra, ny vavantsika tsy hahay afa-tsy ny hisaotra Azy satria efa fantantsika fa tena tiany isika. Magetaheta ny hihaino Azy isan’andro, tsy misy afa-tsy Jesosy no laharam-pahamehana, Jesosy no ambetin-dresaka, Jesosy no maka toerana tsikelikely ao anatin’ny fo sy ny saina ary ny tena rehetra.
Izay no anton’ ny filazantsara, ary natao ho antsika isan’andro isan’andro, ho antom-pivelomantsika, miandry antsika Andriamanitra f’efa nataony ny zavatra rehetra mba handraisantsika Azy, fanapahan-kevitra no andrasany mba hananantsika anjara amin’ny fiainana mandrakizay izay ao amin’i Kristy Jesosy, ho an’izay rehetra manana Azy. Ary io fianana mandrakizay io dia manomboka ety an-tany ary tsy misy fahataperany intsony. Haleloia!
“Ary izao no fanambarany: Fiainana mandrakizay no omen’ Andriamanitra antsika, ary ao amin’ ny Zanany izany fiainana izany. Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak’ Andriamanitra no tsy manana ny fiainana.” 1 Jaona 5:11-12